Ndụ ọhụrụ maka Bluefields Westmoreland Jamaica
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Ndụ ọhụrụ maka Bluefields Westmoreland Jamaica
Ọbịa ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica
Tarting n'isi Nọvemba 2021, atụmatụ Bluefields Best Kept Street Competition, nke bụ echiche sitere na Keith R. Wedderburn nke Bluefields Organic Farm, ga-eme emume wee mata ọrụ siri ike na ihe okike nke ọtụtụ ndị bi na-etinye n'ime ime ka agbata obi ha bụrụ ebe mara mma iji mee ka ọ bụrụ ebe mara mma. ibi ndụ.
A na-akwado ihe nrite n'ịkwalite mpako obodo na mpaghara ha, na-agba ume omume enyi na gburugburu ebe obibi, ịbawanye mmata gburugburu ebe obibi, na inye ndị na-elekọta okporo ụzọ ha ụgwọ ọrụ.
Ndị bi ga-agbakọta ma ọ bụ n'otu n'otu banye n'okporo ámá, mgbe ahụ, a ga-ekenye ndị ọkàikpe ọrụ ịchọta okporo ụzọ kacha mma maka:
1. Kasị Mma Anya Award 2. Kasị Mma n'ihu Garden Award 3. Best Recycling Practice Award 4. Best Kept Street Anti-Litter Award and 5. Ndị na-eto eto na Best Kept Street Award.
E hiwere obodo Bluefields na 1519. Annotto Bay na Sevilla La Nueva ma ọ bụ New Seville bụ obodo abụọ bu ụzọ buo Bluefields. Henry Morgan the Buccaneer, Captain Blight (wetara breadfruit na ackee n'àgwàetiti ahụ), na Henry Gosse, onye edemede a ma ama na nnụnụ West India, anọwo na Bluefields. E nwekwara ọtụtụ ihe ubi nke ihe foduru nke ubi Bluefields na Shafton ka guzo taa. Ka ọ dị ugbu a, ndị otu si n'ime obodo nwere oke mmasị maka ọrụ a chọrọ. E hiwela kọmitii na-ahụ maka njikwa ọrụ nke Keith Wedderburn na-eduzi ma ha enwetalarị nkwado nkwado na nkwa sitere n'aka ndị ezinaụlọ Bluefields bi na mba ofesi.
Ozugbo asọmpi ahụ malitere, ha na-atụ anya mgbanwe zuru oke. Na mgbakwunye na nhicha, ịchọ mma na nhazi nke oghere, ihe ndị a na-atụ anya ya dị ọtụtụ. Dịka ọmụmaatụ, a ga-edozi ihe mkpofu n'ụzọ ziri ezi na-aga n'ihu, a gaghị enwekwa ọkụ nke ihe mkpofu ma ọ bụ ikpofu iwu na-akwadoghị. A ga-agba ndị na-eso ụzọ ume ka ha sonye n'ogbako metụtara njikwa mkpofu siri ike na compost nke ga-eme ka ha mụta otu esi ekewapụ ihe mkpofu ha wee malite iji ihe ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe. Ọzọkwa, a gaghị ahapụ ihe mkpofu a na-achịkọta. Maka nlekọta mkpofu ka mma, a ga-achọ ka ndị ọchịchị dị mkpa na-anakọta ihe mkpofu dị ka plastik, karama iko, faịlụ aluminom wdg n'oge etiti n'okporo ámá ọ bụla. 2 Ụfọdụ nzaghachi dị ugbu a bụ: "Ezigbo echiche nke anyị kwadoro dị ka otu n'ime obodo obodo dị ka azụmahịa azụmahịa ma nyekwa gị nkwado na ozi" - Diana McIntyre Pike, Onye na-ahụ maka ndị na-eme njem nlegharị anya obodo "Ana m anabata echiche ahụ n'ihi na ọ ga-eme ndị mmadụ n'ime obodo na-enwe mmetụta nke mpako maka ebe ha bi, na-enwe mkpali iji soro ya gaa. Ana m enye gị nkwa m, m ga-akwado gị. " – Ralva Ellison, onye otu obodo Belmont, onye bi na mba ofesi ugbu a. "Dị ka ọ dị mma na ụzọ dị mma." Sergeant Berry nke ọdụ ndị uwe ojii Bluefields kwuru.
"Echiche amamihe. Anọ m n'ụgbọ ahụ inye aka mgbe ọ bụla achọrọ m,” ka Robblin Wedderburn, onye bụbu onye bi na Belmont na onye osote onye nlekọta ndị uwe ojii lara ezumike nka nke bi ugbu a na US “Ebumnuche mara mma. Wulite ya gburugburu ndị ntorobịa maka nkwado ogologo oge. " Wolde Kristos, Onye Mmepụta Ogbe na onye bi na Belmont kwuru “Echiche dị mma. Ekwenyere m na ihe dị otú a ga-adị mma maka obodo. " – Nickeisha Robinson, onye bi na Belmont “Magburu onwe… Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, jiri obiọma zipu amụma na adreesị ozi-e m. Aga m enweta ịzụrụ ihe n'aka Westmoreland Municipal Corporation" -
Michael Jackson "Ọ ga-amasị gị ịmekọrịta gị. Anyị na-enye abalị efu maka ihe nrite. " – Linda Cheddister (Luna Seas Hotel) “Ọ dị ka ezigbo ọrụ. Obi ga-adị m ụtọ ịbụ onye ikpe na ọrụ a. Biko nye m ozi ndị ọzọ” - Barrington Taylor (Watershed Projects NEPA) “Daalụ maka itinye aka. Enwere onwe gị izitere m ozi ndị a dị n'elu yana nkọwa ndị ọzọ." - Rochelle Forbes (Onye njikwa Sandal South Coast PR). Dị ka Onye isi oche nke Kọmitii Asọmpi Asọmpi Obodo Bluefields siri kwuo, “Nke a agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na otu ndị ọrụ afọ ofufo anyị raara onwe ha nye na-arụ ọrụ n'azụ ihe nkiri. Ndị a gụnyere Mr André James, Oriakụ Alrica Whyte-Smith, Oriakụ Tracey Edwards, Oriakụ Diana McIntyre-Pike, Nwada Tracey Spence, Mr Charles O. Wilkinson aka Sir W One, Ms Alison Massa, Ms Adrianna Parchment na Mr Kelon Wedderburn. Anyị na-ekele ndị nkwado anyị, ndị enyi, na ezinụlọ nke obodo. Anyị ga-achọkwa iji ohere a gbaa ndị ọzọ si mpaghara a ume, ndị nwere ike na-anọghị, ka ha bata.
Oge ijikọ aka wee nyere aka kwalite okporo ụzọ gị bụ ugbu a! Nke a ga-abụ oghere Jamaica mara mma ị ga-atụ anya, na nloghachi gị. A ga-eji onyinye niile mee ihe maka ihe nrite na iji nyere ndị sonyere aka na nkwadebe, ebe enwere ike. Ọrụ a ga-akpali ndị sonyere n'omume ọma ndị ọzọ, yana enwere ike ịnabata ya n'ụzọ dị mfe na mpaghara ndị ọzọ nke Jamaica wee bụrụ ihe na-akpalite mgbanwe n'ime obodo.